Antony hankafizana fitsangatsanganana any Irlandy | Vaovao momba ny dia
Antony hankafizana fitsangatsanganana any Irlandy
Susana Garcia | | Fialantsasatra any Eropa, General, Irlandy
Irlandy Firenena iray manintona be dia be izy, tsy noho ny sarin'ireo tanàna taloha, havoana maitso ary trano mimanda goavambe, fa ho an'ny kolontsainy sy izay rehetra hitantsika amin'ny dia mankany Irlandy. Tsy misy isalasalana fa iray amin'ny toeran-kaleha tianay hankafizinay vetivety izany, ary raha manana fotoana ianao dia aza adino ny mitsidika azy, satria manana zavatra betsaka hatolotra i Irlanda.
Irlandy, fantatra amin'ny anarana hoe Nosy EmeraldToerana tena fandraisana olona ity, ho an'ny kolontsainy sy ho an'ny mponina ao aminy. Ary tsy isalasalana fa hanana zavatra betsaka hifandraisany amin'izany isika. Na mifantoka amin'ireo tanànany isika na raha manapa-kevitra ny hamoy tena any amin'ireo tanàna tsara tarehy amorontsiraka na any anaty tanety, dia hampino izany zavatra niainana izany. Ary raha tianao ny landscapes izay maka aina, dia hanana antony iray hafa hikarohana tapakila hidina any Irlandy ianao.
1 Ny tanàna mampiala voly
2 Ny antoko dia tany am-boalohany
3 Ireo trano fisotroana sy labiera ao aminy
4 Ny lapa taloha
5 Ireo sary mahafinaritra
Ny tanàna mampiala voly
Ny fitsangatsanganana any Irlandy dia tsy hoe very fotsiny any an-tsaha maitso ary mikatona amin'ireo hantsana tsara tarehy manamorona ny morontsiraka. Ny fitsangatsanganana an'ity firenena ity dia midika koa hoe mahita tanàna maoderina izay misy ny tantaran'ny Irlanda, toy ny amin'ny Dublin, renivohitra. Tsy misy isalasalana fa ity dia iray amin'ireo toerana ilaina indrindra, ary ity tanàna tsara tarehy ity dia manaitra antsika amin'ny dingana rehetra. Faritra tranainy, trano fisotroana an-tsokosoko amin'ny fomba irlandey mahazatra indrindra ao Temple Bar na ilay orinasa mpamokatra labiera Guinness lehibe. Manana zavatra betsaka atolotra i Dublin, ary ambonin'izany rehetra izany dia manana ny lazany ho tanàna velona sy velona tokoa izy, koa aza hadinoina ny fotoana hitsidihana azy tanteraka. Ary na dia ity aza ny tanànany manandanja indrindra, misy ihany koa ireo hafa izay mendrika ho hita, toa an'i Galway, Cork, Belfast na Killarney.
Ny antoko dia tany am-boalohany
Na dia misy antoko marobe aza, tsy maintsy manasongadina iray izay lasa iraisam-pirenena isika. Manondro ny fetim-pirenena any Irlandy izahay, St. Patrick, izay ankalazaina ny 17 martsa manerana ny firenena, miaraka amin'ny karazana hetsika, diabe ary fety. Raha azonao atao ny mampifanaraka ny datin'ny dia miaraka amin'ity fialantsasatra mahafinaritra ity izay anaovan'ny rehetra akanjo maitso, aza hadino izany, satria misy fety na aiza na aiza. Mazava ho azy, tsy maintsy tadidintsika fa mandritra ireo datin'ny fetim-pirenena ireo dia lafo kokoa ny zava-drehetra, indrindra ny toeram-ponenana, satria tsy misy maniry tsy hahita ity fialantsasatra ity.
Ireo trano fisotroana sy labiera ao aminy
Ao Angletera sy Irlandy dia afaka mahita ny fomban-drazan'ny trano fisotroana misy ramana am-boaloboka na fiotazam-boaloboka, miaraka amina firazanana sarotra ampifanarahana. Ireo trano fisotroana ireo dia eny rehetra eny amin'ny tanàn-dehibe ary na amin'ny tanàna aza, satria tsy fotoana ratsy mihitsy ny manandrana labiera mainty na patin-kenatra, satria tsy tokony hohadinointsika fa nipoitra teto ity zava-pisotro ity. Rehefa tonga any amin'ny trano fisotroana ianao dia mety ho gaga amin'ny isan'ny labiera hisafidianana, toy ny any amin'ireo trano fisotroana any London, ary misy kolontsaina tsara an'io fisotroana io. Raha manana olana amin'ny fisafidianana ianao satria tsy fantatrao ny marika, azonao atao ny manontany ny Irlandey, satria olona sariaka sy akaiky izy ireo, ary tsy ho azon'izy ireo atao ny mamoaka ny fahalalany ny labiera. Ary raha azonao atao, aza adino ny mitsidika ny orinasa Guinness any Dublin hanandramana ity labiera ity.
Ny lapa taloha
Any Irlandy dia misy maro trano mimanda hitsidika. Raha ny marina dia azo atao ny mamaky làlana hitsidihana ireo zava-dehibe indrindra ary tsy isalasalana fa dia lavitra izany. Raha ny tena izy dia misy trano maherin'ny 300, misy ny sasany voatahiry tsara ary mbola onenana ary ny hafa kosa ankehitriny dia voatahiry ao anaty rava nefa mbola mijoro ihany. Ny sasany manan-danja indrindra dia ny an'i Malahide, izay voalaza fa manana matoatoa manokana, ny an'i Dunluce, miaraka amin'ny fahitana tsara ny hantsana, na ny an'i Blarney, izay raha manoroka ny vato isika dia hahazo ny fahaiza-miteny. Misy tranobe mahaliana tsy isalasalana fa mahaliana amin'ny fanoratana boky, ary ao amin'izy ireo dia tsy mahaliana fotsiny ny lapa, fa indraindray koa ireo sary mahafinaritra manodidina azy ireo ary matetika no tehirizina, mba ho azon'ny mpitsidika an-tsaina hoe nanao ahoana ity toerana ity taloha izay taona.
Ireo sary mahafinaritra
Na dia hevitra lehibe aza ny fitsangantsanganana any amin'ny tanàna toa an'i Dublin noho ny habetsaky ny zavatra hitantsika ao anatin'ny fotoana fohy, ny tena marina dia manana zaridaina mahatalanjona i Ireland izay tsy tokony hotadidintsika. Hevitra lehibe dia ny manofa fiara ary mitsidika toerana samy hafa, tsy mila maika sy mahafantatra tanàna kely sy milamina. Ny morontsiraka, miaraka amin'ireo hantsam-bato goavambe, no iray amin'ireo toerana lehibe alehan'ny mpizahatany matetika, fa koa ao afovoan-tany, miaraka amin'ireo saha maitso midadasika, afaka mankafy ireo sary miavaka isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Antony hankafizana fitsangatsanganana any Irlandy
Antony 5 hahafantarana an'i Jordania tsy mampino
Toerana fizahan-tany lehibe any Mongolia